မြေအောက်သို့ တဖြေးဖြေး နှစ်မြုပ်နေသော မြို့တော်များ (SINKING CITIES) ( မြေအောက်ရေကို အလွန်အကျွံ ထုတ်သုံးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးတွေ သတိထားရတော့မယ်….) – စှယျစုံသုတ
မြေအောက်သို့ တဖြေးဖြေး နှစ်မြုပ်နေသော မြို့တော်များ (SINKING CITIES) ( မြေအောက်ရေကို အလွန်အကျွံ ထုတ်သုံးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးတွေ သတိထားရတော့မယ်….)
ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပိုမိုပူပြင်းလာ၍ ရေခဲပြင်များအရည်ပျော်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာနေမှုကြောင့် ကမ်းခြေအနီးရှိ မြို့တော်များတဖြေးဖြေး နိမ့်ဝင်နေကြသလို အချို့မြို့တော်များကတော့ မြေအောက်ရေများ (Groundwater) ကို အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူသုံးစွဲနေမှုကြောင့်
မြေအောက်ဖိအားအနေအထားများ ပြောင်းလဲပြီး မြေအောက်သို့ ဖြေးဖြေးခြင်း နိမ့်ဝင်နေတဲ့ မြို့တော်တချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူဦးရေ (၁၀) သန်းကျော်ရှိတဲ့ မြို့တော်ဂျာကာတာ ဟာ မြေအောက်ရေ (Groundwater) တွေကို အလွန်အကျွံ ထုတ်သုံးနေခဲ့တာကြောင့် တစ်နှစ်ကို (၆.၇”) လက်မနှုန်းနဲ့ မြေအောက်ကို
နှစ်မြုပ်နေရာမှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကလည်း မြင့်တက်လာနေရာ မိုးရာသီရေကြီးရေလျှံမှုကို ခံစားနေရပြီး လာမဲ့ (၂၀၅၀) ခုနှစ်လောက်မှာ ရေအောက်ရောက်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
မြို့တော်ကို လက်ရှိနေရာမှ ကီလိုမီတာ (၁၀၀) ကျော်လောက်ဝေးတဲ့ နေရာကို ရွှေ့ပြောင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီး အချိန်ခန့်မှန်းခြေ (၁၀) နှစ်ခန့်ကြာမှာ ဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ (၃၃) ဘီလီယံလောက် ကုန်ကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မြို့တော် ဘန်ကောက်
လူဦးရေ ( ၈ ) သန်းကျော် နေထိုင်တဲ့ ဘန်ကောက်မြို့တော်ကြီးဟာလည်း တစ်နှစ်လျှင် ( ၁ ) စင်တီမီတာနှုန်းနဲ့ နှစ်မြုပ်နေပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်ကို လာမဲ့ (၂၀၃၀) ခုနှစ်မှာ ရောက်ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ် ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့ထိုင်းဗိသုကာအသင်းက ဒီဇိုင်းထုတ် ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ မိုးရေ ဂါလံ တစ်သန်းကျော်ထိ ယာယီလှောင်ထားနိုင်တဲ့ မြေအောက်ရေလှောင်ကန်ကြီးပါဝင်တဲ့
ချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့် ပန်ြးံခံကြီးကို မြေဧက (၁၁) ဧကပေါ်မှာ ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်တဲ့။
ဒက္ကားမြို့ (Dhaka) (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမြို့တော်)
နိုင်ငံရဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နေရာမှာ တည်ထားတဲ့ မြို့တော် ဒက္ကားကတော့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာမှုကို သိသိသာသာ ဆိုးရွားစွာ ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
လာမဲ့ သက္ကရာဇ် (၂၀၅၀) မှာ နိုင်ငံရဲ့ (၁၇%) ကို ပင်လယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီး လူဦးရေ (၁၈) သန်းကို ရေလွှတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးရမှာပါ။
နိုင်ဂျီးရီယားနိုင်ငံ မြို့တော် လာဂိုစ် (Lagoes, Nigeria)
အာဖရိကတိုက်ရဲ့ အနောက်ဖက်ကမ်းခြေမှာ တည်ရှိတဲ့ အကြီးဆုံးမြို့တော်ကြီး လာဂိုစ်ရဲ့ ကမ်းခြေအနိမ့်ပိုင်းတွေဟာ မြင့်တက်လာနေတဲ့ ပင်လယ်ရေရဲ့ တိုက်စား ဖုံးလွှမ်းခြင်းကို ခံနေရပြီး ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပူနွေးလာမှုကြောင့် ဖြစ်လာနေတဲ့ ဘေးဒုက္ခအန္တရာယ် ကျရောက်နေပါပြီ။
(၂၀၁၂) ခုနှစ်က လေ့လာမှုများအရ လက်ရှိပင်လ်ာရေမျက်နှာပြင်ထက် (၃) ပေမှ (၉) ပေမြင့်တက်လာပါက လာဂိုစ် နေပြည်သူများရဲ့ ကမ္ဘာပျက်ခန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။
ယခုရာစုနှစ်ကုန်တွင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်ပေ (၆) ခန့်မြင့်တက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
ဗင်းနစ်မြို့ (Venice) အီတလီနိုင်ငံ
အီတလီတို့ရဲ့ တိုးရစ်တကာတို့ အလေးပေးလည်ပတ်ရာ ဗင်းနစ်မြို့ဟာ မြို့တွင်းမှာ ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ တူးမြောင်းတွေကြောင့် ဝင်ငွေကောင်းနေခဲ့ရာမှ သတိထားတိုင်းတာမိချိန်မှာတော့ တစ်နှစ်ကို (ဝ.၀၈”) လက်မနှုန်းနဲ့ မြေအောက်ကို နှစ်ဝင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
အီတလီတို့က (၂၀၀၃) ခုနှစ်ကစပြီး ဗင်းနစ်ကို ရေလွှမ်းမိုးမှုက ကာကွယ်ရန် ရေတံခါးပေါင်း (၇၈) စင်းပါဝင်တဲ့ ရေတားတွေ အဆင့်ဆင့်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ရာ (၂၀၁၁) ခုနှစ်က ပြီးစီးခဲ့ပေမဲ့ ဂိတ်တံခါးတွေ အကုန်လုံးကိုတော့ လာမဲ့ (၂၀၂၂) ခုနှစ်မှ အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယမန်နှစ် (၂၀၁၈) ခုနှစ်မှာ ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ ဒေါ်လာ (၆.၅) ဘီလီယံ စီမံကိန်းကြီးပါ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီး ဗင်းနစ်တမြို့လုံး ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ပါတယ်။
ရော့တာဒန်မြို့တော် (Rotterdam) နယ်သာလန်နိုင်ငံ
(၉၀%) သော ရော့တာဒန်မြို့တော်ရဲ့ နေရာတွေဟာ နဂိုကတည်းက ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် နိမ့်နေပြီးပါပြီ။ ယခုအခါ ပင်လ်ာရေမျက်နှာပြင်က ထပ်မံမြင့်တက်လာနေရင် ရေလွှမ်းမိုးမှုအန္တရာယ်က ကြီးမားလှပါတယ်။
ထိုင်းတွေဆောက်ခဲ့တဲ့ ချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်ပန်းခြံကြီးလိုဘဲ ဒခ်ျတွေဟာ ရေဥယာဉ်များကို မြို့တော်အနှံ့မှာ မုန်တိုင်းကြောင့် ရေလှိုင်းတွေမြင့်တက်လာရင် ကာကွယ်ဖို့ အတားအဆီးတွေ တည်ဆောက်ထားကြပါတယ်။
အလက်ဇန္ဒရီးယားမြို့ အီဂျစ်နိုင်ငံ (Alexandria, Egypt)
မြို့တော်ရှိ ပင်လယ်ကမ်းခြေများဟာ ပင်လယ်ပြင်မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ရေဖုံးလွှမ်းပြီး ပျောက်ကွယ်နေပါပြီ။ မြေထဲပင်လယ်ဟာ (၂၁၀၀) ခုနစ်မှာ (၂) ပေခန့်မြင့်တက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
အမေရိကန် အရှေ့ဖက်ကမ်းခြေရှိ ဟူစတန် (Houston)(Texas ပြည်နယ်) ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတချို့ဟာ တစ်နှစ်လျှင် (၂”) လက်မနှုန်းဖြင့် မြေအောက်သို့ နှစ်မြှုပ်နေရာ ပြီးခဲ့သည့်
ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြီး (Harvey) ကဲ့သို့သော မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ပို၍ ခံစားနေရပါတယ်။ အိမ်အလုံးပေါင်း (၁၃၅၀၀၀) ပျက်စီးပြီး လူပေါင်း (၃၀၀၀၀) ကျော်ကို ကယ်ဆယ်ခဲ့ရပါတယ်။
အရှေ့ဖက်ကမ်းခြေရဲ့ နှစ်မြှုပ်နေတဲ့ မြို့ကတော့ ဗာဂျီးနီးယားမြို့တော်ရဲ့ ကမ်းခြေများ (Virginia Beach) ကတော့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာခြင်း နှင့် မြေအောက်သို့ မြုပ်ဝင်နေခြင်းကို
တပြိုင်နက်ထဲ ခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ NOAA ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ လာမဲ့ (၂၁၀၀) ခုနှစ်မှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့် (၁၂) ပေခန့်မြင့်တက်ပြီး ရေလွှမ်းခံရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
မက်စီကိုပင်လယ်ကွေ့မှာ တည်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ တောင်ဖက်ပြည်နယ် လူဝီစီယားနား (Louisiana) ရဲ့ နယူးအော်လင်း မြို့ (New Orieans) ကို (၂၀၀၅) ခုနှစ်က ကက်ထရီးနားမုန်တိုင်း (Harricane Katrina) တိုက်ခတ်လို့ အပျက်အစီးနဲ့ အသေအပျောက်များခဲ့တာ အမှတ်ရမိကြပါလိမ့်မယ်။
မြို့တော်ရဲ့ အစိပ်အပိုင်းတစ်ချို့ဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်ကို (၁၅’) ပေခန့် နိမ့်ဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်လျှင် (၂”) လက်မနှုန်းနဲ့ နှစ်ဝင်နေခဲ့ပြီး နယူးအောလင်းမြို့ဟာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဖြစ်တာမို့ ပင်လယ်ရေတိုးဝင်နေတဲ့ဒဏ်ကို ပိုခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုပူပြင်းလာသော ရာသီဥတုကြောင့် ရေခဲပြင်များအရည်ပျော်နှုန်း မြန်ဆန်လာခြင်းနှင့်အတူ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာခြင်းဒဏ်ကို ဆက်စပ်နေသည့်ဒေသများ အားလုံး ခံစားနေကြရပြီဖြစ်ရာ မိမိတို့ကမ်းခြေဒေသများကို ဂရုစိုက် စေါင့်ရှောက်ကြရန် တိုက်တွန်းရပါသည်။
Ref: News for sinking cities from internet.
တင်မြင့် (Mech75) အားလေးစားစွာ ခရက်ဒက်ပေးပါသည်
CRD_Climate Change Inside Myanmar
ထောင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး က ပုဆိုးခါပြခိုင်းပြီး”ဘာပါလဲ”လို့မေးတော့” အ၀ှါ ” ပဲပါတာလို့ ဖြေခဲ့တဲ့”ချင်း”သူရဲကောင်း NLD အမတ်ဦးဒိုထောင်း(သို့မဟုတ်)သံမဏိရဲတိုက်အိုကြီး